Abbaan warraa fi haati warraa hoospitaala Phaawulositti yaala maseenummaa hordofaa turan daa’ima argatan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Abbaan warraa fi haati warraa hoospitaala Phaawulositti yaala maseenummaa hordofaa turan daa’ima argatan
On Jan 14, 2020 103
Finfinnee, Amajjii 5, 2012 (FBC) – Abbaan warraa fi haati warraa Giddugala Yaala maseenumaa Koollejjii Yaala Miliniyeemii Hoospitaala Qiddus Phaawulositti yaala maseeenumaa hordofaa turan daa’ima argataniiru.
Abbaan warraa fi haati warraa kun erga gaa’ila dhaabbatanii waggaa torbaa ta’ullee daa’ima argachuu hin dandeenye.
Hospitaalichi waggaa dabarsine baatii Ebila irratti kan eegale hordoffii yaala giddugala maseenummaatti taasiseen daa’ima jalqabaa argachuu danda’aniiru.
Abbaan warraa fi haati warraa kun daa’ima argachuu kan danda’an yaala ‘Intro vitro fertilization’ kan jedhamuun yoo ta’u, baatii dhufanitti haadhooliin 70 ta’an yaala kanaan daa’ima ni argatu jedhameera.
Abbootiin amantaa dhibee HIV ittisuu fi too’achuuf itti gaafatamummaa isaanii akka…
Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) qorichoota aadaa Afrikaa Covid19 fayyisu jedhaman…
Biyyatiitti dhukkuboonni daddarboo hintaane sadarkaa yaadessaarra gahuun ibsame
Guyyaan nageenya wallaannamtootaa kabajamaa jira
Abbootiin amantaa dhibee HIV ittisuu fi too’achuuf itti…
Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) qorichoota aadaa Afrikaa…
Biyyatiitti dhukkuboonni daddarboo hintaane sadarkaa…